Steemitmyanmarမှ​ကျေးဇူးတင်​ထိုက်​သူများ — Steemit
Steemitmyanmarမှ​ကျေးဇူးတင်​ထိုက်​သူများsteemCreated with Sketch.
Steemit ကိုစတင်​ဝင်​​ရောက်​လာတုန်းအခါက စမ်းတဝါးဝါးနှင့်​ဖြစ်​ပါသည်​။ ဘယ်​က​နေဘယ်​လိုလုပ်​ရမလည်းမသိ အ​ကောင့်​​လေး​တောင်​ဘယ်​ကဖွင့်​ရမလည်းနားမလည်​၊ အကိုဆန်းမင်းထွန်း ရဲ့အဖွဲ့မှာအ​ကောင့်​ဖွင့်​နည်း​လေးစ​တွေခဲ့ရာက​​နေ steemit မှာစတင်​​လျှောက်​လျှမ်းဖို့အရာလမ်းစ ​တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။steemit ကိုစတင်ဖို့အတွက်​​လမ်းစပြေ​ပးခဲ့သည့်ေ​ဆရာဆန်းမင်းထွန်းကို ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ လို့ ဒီ​နေရာက​နေ​ပြောကြားလိုပါတယ်​။
ဒုတိယ အ​နေနဲ့က​တော့ ဆရာချစ်​ချစ်​ပါ။
Steemit အ​ကောင့်​​လေးက​တော့ ရရှိသွား​တော့လည်း ဘယ်​​နေရာက ပို့တင်​ရမည်​၊ဘယ်​​နေရာက ကွန်​မန့်​​ရေးရမည်​ကို မသိ​သေး​လေ​တော့ ဆရာချစ်​ချစ်​ရဲ့ facebook
ဆရာချစ်​ချစ်​ကလည်း သ​ဘော​ကောင်းရှာပါတယ်​၊ သူ့​နေနှင့်​ရှင်းပြ​ပေးရန်​ အချိန်​မလုံ​လောက်​​ကြောင်း၊သင်​ကြား​ရေး အဖွဲ့တစ်​ခုထဲမှဆရာ တင်​လှိုင်​ဦးကို​ပြော​ပေးရှာပါသည်​။
ထို့​ကြောင့်​ ဆရာချစ်​ချစ်​ ကိုလည်းဒီ​နေရာက​နေ ​ကျေးဇူးတင်​ရှိပါ​ကြောင်း​ပြောကြားလိုက်​ရပါသည်​။
. . . ဆရာတင်​လိုင်​ဦး သင်​ကြား​ပေး​သောအဖွဲ့တွင်း​ရောက်​ရှိလာမှသာ steemit အ​ကြောင်းကို အ​တော်​အသင့်​နားလည်​လာ​တော့တယ်​။
ဆရာဟာဖြင့်​ steemit အ​ကြောင်းသာမက လူမှုဆက်​ဆံ​ရေး၊စိတ်​ဓာတ်​တက်​ကြွ​စေ​ရေး၊​ခေါင်း​ဆောင်​မှုစွမ်းရည်​များ ကျွန်​​တော်​လို တပည့်​သားသမီး အားလုံ​ပေါ် ​စေတနာ၊
​မေတ္တာ ၊အနွံနာ ခံသင်​ကြား​ပေးသည်​ကိုလည်း ဆရာအဖွဲ့အတွင်းရှိကြသည့်​ တပည့်​သားသမီးများအားလုံးအသိ ဖြစ်​ပါတယ်​။
ဆရာ့ အဖွဲ့​လေးထဲမှာလည်း မိသားစုစိတ်​ဓာတ်​ပြည့်​ဝသူများ နှင့်​​တွေ့ရှိရသဖြင့်​ ​ကျေနပ်​အားရမိပါတယ်​။
ကျွန်​​တော်​အ​နေနဲ့ အင်္ဂလိပ်​စာ အားနည်းခြင်း​​ကြောင့်​ အကို ​အေးချမ်း၊အမ စ​နေ စသည့်​ကအကိုအမများထံသို steemit tag တွဲနည်းများကို​မေးမြန်းသင်​ကြား​နေရဆဲပြစ်​ပါသည်​။ထို့​ကြောင့်​လည်း ဆရာတင်​လှိုင်​ဦးအပါဝင်​ သင်​ကြား​ရေးအဖွဲ့​​လေးအတွင်းမှ အကို၊အမ များကိုလည်း​ကျေးဇူးတင်​ရှိပါသည်​။ကျွန်​​တော်​တို့ အဖွဲ့​လေးတွင်းမှ အကို၊အမများနှင့်​လည်း တစ်​ဦးကမှား​နေလျှင်​၊တစ်​ဦးက ရှင်းပြနှစ်​သိမ့်​​ပေးခြင်းမျိုး ညီအကို၊​မောင်​နှင့်​နှမ စိတ်​ဓာတ်​မျိုးဖြင့်​ ​ရေရှည်​လက်​တွဲသွားလိုပါသည်​။
ကျွန်​​တော်​ ပထမဆုံးအ​ကောင့်​​လေး မှာနိုင်​ငံခြားသားများတင်​သည့်​ပို့​အောက်​တွင်​ သူတို့မကြိုက်​တာမန့်​မိသည့်​အတွက်​ flag အလုပ်​ခံရသည်​ ဖြစ်​​ကြောင်း facebook လိုဆိုလျှင်​ မိမိအ​ကောင့်​​လေးအား repoprt အထုခံရခြင်းမျိုးဖြစ်​​ကြောင်း ကိုလည်း အကို Waz Ok Taht မှရှင်းပြ​ပေးလို့သိရှိခဲ့ရပါသည်​။
ဆရာ A Tar Oo မှလည်း ကျွန်​​တော်​အ​ကောင့်​​လေးအ​နေဖြင့်​ pro စရင်းထဲထည့်​​ပေးလို့မရရှိ​ကြောင်း၊အ​ကောင့်​သစ်​နဲ့ပြန်​စတင်​သင့်​​ကြောင်း ရှင်းပြအကြံ​ပေးခဲ့ပါသည်​။
ထို့အတွက်​လည်း ဆရာ A Tar Ooအား​ကျေးဇူးတင်​ရှိပါသည်​။
​steemit myanmar မိသားစုဝင်​အားလုံး၊​ကျေးဇူးတင်​ထိုက်​သူအားလုံးကို ဒီ​နေရာက​နေ ​ကျေးဇူးအထူးတင်​ရှိပါ​ကြောင်း ​ရေးသားလိုက်​ရပါသည်​။
Streemit မိသားစုဝင်​အားလုံး စိတ်​ချမ်းသာ ကိုယ်​ချမ်းသာစွာဖြင့်​ ​နေ့သစ်​တိုင်းကို ဖြတ်​​ကျော်​နိုင်​ကြပါ​စေဗျာ
myanmar steemit story pohtography
konyi (55) ·9months ago
ဆက်၍ ဆက်၍ လျောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ
myanmarkoko (52) ·9months ago
sawlwin (56) ·9months ago
kyawsantun (56) ·9months ago
tinhlaingoo (61) ·9months ago
Up Vote ပါ။
ဆရာ ဂရုစိုက်​​ပေတာကို ​ကျေးဇူးအထူးတင်​ပါတယ်